Ahoana ny fomba hampitomboana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny dingana 5 ▷ ➡️
Ahoana ny fomba hampitomboana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny dingana 5. Ny olombelona dia biby fiarahamonina. Mila mifandray akaiky amin'ireo olona tiantsika isikaMila ny fitiavana sy ny fitiavana ny olon-kafa isika hananganana ny tontolontsika anaty.
Na izany aza, ny lalana tokana mankany mampiorina ny fiainam-panahintsika hany ka feno ny tontolontsika anaty ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Noho izany dia ilaina ny mampitombo ny fifandraisantsika akaiky amin'ny Ray.
Ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra dia zavatra iray mahatonga izany mila miezaka daholo isika. Tokony hotadidintsika fa tian'Andriamanitra ny zava-drehetra el tontolo ary maniry fifandraisana akaiky amintsika tsirairay avy. Noho io antony io dia nieritreritra izahay fa ilaina ny mamorona lahatsoratra hianaranao ampitomboy ny maha-akaiky anao AZY.
avy amin'ny discover.online, hanampy anao hianatra izahay ny fomba hampitomboana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny dingana 5. Hanomboka ve isika?
1 Ahoana ny fomba hampitomboana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny dingana 5
1.1 1. Fantaro Andriamanitra amin'ny alàlan'ny teniny
1.2 2. Mitadiava fotoana hanaovana vavaka sy fifadian-kanina
1.3 3. Mankatoava an'Andriamanitra
1.4 4. Mipetraha eo amin'ny fiaraha-monina
1.5 5. Mankasitraka
1. Fantaro Andriamanitra amin'ny alàlan'ny teniny
Fantaro Andriamanitra amin'ny alàlan'ny teniny
Tsy misy olona akaiky olona tsy fantany, ary ny famakiana Baiboly no fomba tsara indrindra hahalala an’Andriamanitra. Tsy maintsy manao izay lazain'ny mpanao salamo isika: "Notehiriziko tato am-poko ny teninao mba tsy hanotako aminao" (Salamo 119: 11).
Iray amin'ireo ny tanjon'ny Baiboly dia ny manova ny fiainantsika. Hitantsika ao amin'ny Hebreo 4:12: "Satria velona sy mahomby ny tenin 'Andriamanitra ary maranitra noho ny sabatra roa lela; tonga hatrany amin'ny fizarana ny fanahy sy ny fanahy, ny tonon-taolana ary ny medulla ary mitsara ny eritreritra sy ny fikasan'ny fo ”.
Rehefa mahalala ny Baiboly isika dia lasa mahalala an’Andriamanitra, miteraka fifandraisana akaiky, mahazo toky isika ary mahay miandry an 'Andriamanitra, na dia tsy tsara aza ny toe-javatra. Fantatsika avy amin'ny Baiboly hoe iza Andriamanitra.
2. Mitadiava fotoana hanaovana vavaka sy fifadian-kanina
Mitadiava fotoana hanaovana vavaka sy fifadian-kanina
Tahaka ny itadiavanao fotoana hahitana ny ray aman-dreninao na ny namanao, dia mila izany ianao mitadiava fotoana hanaovana vavaka sy fifadian-kanina, satria io no hany fomba ifandraisana amin'Andriamanitra.
Na izany aza, ilaina ny mahafantatra ny fomba tokony hitenenanao ny Tompo amin'ny alàlan'ny vavaka. Zava-dehibe ny hahafantaranao izay nolazain'i Jesosy hoe:
Ary rehefa mivavaka ianao dia aza manahaka an'ireo mpihatsaravelatsihy. Tian'izy ireo ny mivavaka ao amin'ny sinagoga sy eny an-joron-dalambe mba hahitan'ny hafa azy ireo. Manome toky anao aho fa efa nahazo ny valisoany feno izy ireo. Fa rehefa mivavaka ianao dia mankanesa any amin'ny efitranonao, manidy varavarana ary mivavaha amin'ny Rainao, izay ao amin'ny mangingina. Ary ny Rainao, Izay mahita ao amin'ny mangingina, no hamaly anao »
Matio 6: 5-6
Tsy toy ny mpitondra fivavahana tamin'izany, izay nivavaka mba ho hitan'ny lehilahy, Nivavaka i Jesosy satria sarobidy aminy ny fifandraisana akaiky amin'ny rainy.
Amin'ny lafiny iray, ny fifadian-kanina ihany koa mitondra akaiky sy akaiky an'Andriamanitra, satria manampy antsika hanalavitra na mametra ny finiavantsika hihaino ny sitrapon'ny Ray.
Raha tsy nandeha lavitra, ireo olona izay nanana fifandraisana akaiky indrindra tamin'Andriamanitra nandritra ny tantara dia nampiasa fifadian-kanina. Izany no nahatonga azy henoy sy fantaro tsara kokoa ny sitrapon'Andriamanitra. Tamin'izany no nahazoan'izy ireo fifandraisana akaiky Aminy.
Nifady hanina 40 andro i Mosesy.
Nifady hanina 3 andro i Ezra.
Nifady hanina 40 andro i Elià.
Nifady hanina 21 andro i Daniel sy ny namany.
Nifady hanina 40 andro i Jesosy.
3. Mankatoava an'Andriamanitra
Ahoana no hampitomboana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny dingana 5: maneke
Fankatoavana an'Andriamanitra hita foana tamin'ny fiainan'i Jesosy: "Hoy Jesosy: Ny haniko dia ny manao ny sitra-pon'izay naniraka ahy sy ny mahavita ny asany" (Jaona 4:34).
Tao amin'ny andalan-tsoratra masina iray hafa, dia nilaza i Jesosy fa: "Satria nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny hanao ny sitrapon'izay naniraka ahy." (Jaona 6:38).
Ny fankatoavana fametrahana azy io, vita amin'ny fifehezana sy ny fanoloran-tena. Azontsika atao ny mahita fa tsy nankatò an 'Andriamanitra i Saoly Mpanjaka ary nahazo fampitandremana (1 Samoela 15:22). Hitanay fa noho ny tsy fankatoavany dia nolavina tsy ho mpanjakan'ny Isiraely i Saoly ary nanomboka nanjary tsy nety izy. Nandany ny fahafahany nankatò sy notahin'Andriamanitra ary nifandray am-po tamin'ny Tompo i Saoly.
Manana isika be ny azo raha mankatoa ny Tompo isika. Ny Zanaka mihitsy dia nanaiky hatramin'ny FAHAFATESANA. Arakaraka ny maha-mpankato antsika no manakaiky antsika ary manakaiky an Andriamanitra, dia vao mainka isika maniry hanao ny sitrapony.
4. Mipetraha eo amin'ny fiaraha-monina
Ahoana ny fomba hampitomboana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny dingana 5: Miaina eo amin'ny fiaraha-monina
Rehefa miaina fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra isika dia tena faly amin'izany Tianay ny mizara izany amin'ny hafa, anisan'izany ireo rahalahy ao amin'ny finoana.
Jesosy dia olona mifandray. Izany no antony, arakaraka ny maha-lehibe kokoa ny fifandraisantsika Aminy no hanatonana antsika bebe kokoa ho an'ny olona. Misy ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miaina, eo amin'ny fiaraha-monina (1 Jaona 1: 7).
Ohatra iray hafa ao amin'ny Baiboly azontsika tsara ny ao amin'ny 1 Jaona 4:20: "Raha misy miteny hoe:" tiako Andriamanitra ", nefa mankahala ny rahalahiny, dia mpandainga izy satria izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany dia tsy afaka mitia an Andriamanitra izay tsy hitany.
Mbola nanohy ny torolalana iray ihany ny apostoly Paoly: "Noho izany dia tsy vahiny intsony ianareo, fa mpiray tanindrazana amin'ny olona masina sy mpianakavian'Andriamanitra" (Efesiana 2:19).
Jesosy dia manome antsika ity torolàlana mazava ity iray ihany isika rehetra ao amin'ny tompo. Firaisankina mitovy, fanoloran-tena mitovy, fiainana iray, fifankatiavana, fiainana eo amin'ny fiaraha-monina.
“Mba ho iray ihany izy rehetra, Ray, tahaka ahy ao amiko, ary Izaho ao aminao. Enga anie mba ho ato aminay koa ireo, mba hinoan'izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy " Jaona 17:21.
Ahoana no hampitomboana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny dingana 5: mankasitraka
Tsy izany no fankasitrahana, na farafaharatsiny tsy tokony hatao, zavatra manokana amin'ny fotoana mahafinaritra. Tsy natao ho an'ny asa vaovao fotsiny, trano vaovao, fiara vaovao.
Azontsika jerena izay lazain'i Paoly momba ny toe-javatra misy ny olombelona, ​​ny tsy fahaizany fankasitrahana an'Andriamanitra, ny fankasitrahany:
"Ny olona dia ho tia tena, tia vola, sahisahy, be hambo, manevateva, tsy manoa ray aman-dreny, tsy mahay mankasitraka, tsy tia an'Andriamanitra."
2 Timoty 3: 2
"Fa nahalala an'Andriamanitra izy, nefa tsy nankalaza azy ho Andriamanitra na nisaotra, fa tonga foana ny fisainany ary tonga maizina ny fony dondrona."
Romana 1: 21
Hitantsika ao amin'ny Salamo 95:10 ny fon'ny olona tsy mahay mankasitraka:
"Nandritra ny efapolo taona dia tezitra tamin'io taranaka io aho ka nanao hoe:" Tsy mahay mankasitraka izy ireo ao am-pony; Tsy fantany ny lalako.
Manana a ny fo feno fankasitrahana dia manova ny zava-drehetra amin'ny fiainantsika. Ny fahalalana ny fomba hahafantarana fa nomen'Andriamanitra fotoana hifaliana amin'ny fiainana isika.
Misaora an'ny Tompo fa tsara Izy; maharitra mandrakizay ny fitiavanao " .
Salamo 107: 1
Por eso ny fankasitrahana sy ny fiderana no miarakaSatria rehefa midera ny Tompo isika dia maneho ny fankasitrahantsika ary miaiky ny hatsaram-panahiny.
Ndao isika hankasitraka hatrany, na inona na inona toe-javatra misy, ary tsarovy fa mitady ny tsara indrindra ho antsika foana Izy. Ny fananana fo feno fankasitrahana dia miteraka fifandraisana akaiky amin'ny Tompo.
"Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra, dia ireo izay nantsoina araka ny fikasany."
Romana 8: 28
"Fa fantatro ny eritreritro momba anao, hoy Jehovah, ny fiadanam-po fa tsy ny ratsy, mba hanome anao ny farany antenainao."
Manantena izahay fa hanampy anao hahatakatra ity lahatsoratra ity ny fomba hampitomboana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny dingana 5. Raha te hianatra ianao izao ny fomba fivavahana veloma arak'izay lazain'ny baiboly, mamporisika anao izahay hanohy hitety discover.online.